China Manufacturers ambongadiny avo lenta fampitandremana harato mba hisorohana ny fanorenana zavatra tsy hianjera mpanamboatra sy ny mpamatsy | Kede Netting
Ny mpanamboatra dia mivarotra harato fampitandremana avo lenta mba hisorohana ny fianjeran'ny zavatra fanorenana
Ny hamafin'ny dia avo roa heny noho ny mahazatra PE anti-vorona harato, vita amin'ny 8000d kofehy tokana
Ny harato fampitandremana dia antsoina koa hoe fefy fiarovana. Ity vokatra ity dia vita amin'ny polyethylene avo lenta ho fitaovana manta, voahodina miaraka amin'ny anti-ultraviolet additives, ary extruded sy mihinjitra amin'ny rafitra toy ny harato amin'ny lohan'ny milina manokana.
Endri-javatra vokatra: Ny harato ambonin'ny dia fisaka, matanjaka ary tsy mora ny misintona, tsara sy malefaka, fanamiana harato, miaraka amin'ny anti-fahanterana, harafesiny fanoherana, ary tsara flexibility.
Ny loko dia tena fotsy sy mena, ary ny loko hafa toy ny mainty, manga, mavo, sns, dia azo omena ihany koa amin'ny fangatahana.
Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana ifotony, fanamafisana ny kitapo taratasy; harato fototry ny zavamaniry telo dimensions, harato fanohanana zavamaniry; harato fiarovana amin'ny fikojakojana ny lalana; fiambenana tokotany, haingon-trano, sns. Izy io dia fampitandremana eo amin’ny toeram-panorenana ary azo ampiasaina indray.
Ny vokatra dia aondrana any Japon, Etazonia, Eoropa, Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra hafa, ary nahazo fiderana niraisan-kina.
Lanja afa-karatsaka 50g-200g/㎡
Webmaster (20-100m) azo namboarina araka ny mpanjifa
Color Fotsy sy mena
Fahaizana famatsiana 200T isam-bolana
Package Kitapo plastika miampy harona tenona
Ity vokatra ity dia afaka misoroka tsara ny entana amin'ny fanorenana ary miaro ny mpiasa amin'ny ratra
Ankoatra izany, voahodidin'ny faritra mampidi-doza izy io mba hitazomana ny fiarovana.
Ampiasaina betsaka amin'ny: tranobe, lalana ary faritra mampidi-doza
teo aloha: Mpanamboatra harato anti-bird edge net
harato hisambotra voankazo mianjera avy amin'ny hazo
Ozinina ambongadiny ny fefy trano fonenana vita any Sina
Mpanamboatra harato fihanihana zavamaniry sy voly
Miavaka amin’ny famokarana zaridaina voninkazo...
Mpanamboatra harato anti-bird edge net
Mpanamboatra matihanina anti-...
Fanamboarana efijery bibikely kalitao avo lenta ...